الفاتحون: العصر الذهبي 2.4.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.4.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ الفاتحون: العصر الذهبي
الفاتحون: العصر الذهبي ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါရွှေခေတ်တစ်ဦးကဗားရှင်းသစ်အဆိုပါထောင်စုနှစ်ရှေ့တော်၌ထိုအာရပ်အင်ပါယာ၏မြင့်တက်သက်သေခံများနှင့်သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏ဘုန်းအသရေ၏ရနံ့ပြန်လည်ငှါ, မော်ကွန်းစိန်ခေါ်မှုများ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် features တွေရန်သင့်အားကြာပါသည်။ ဒီမှာသင်၏လက်အနိုင်ရသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုသည်ကြီးစွာသောတန်ခိုးဖြစ်လာဘုန်းအသရေ၏အဆင့်အထိ Baklatk ခြီးမွှော, အင်အားအကောင်းဆုံးကလေးစစ်သားတသစ်ကိုသူရဲကောင်းများ, ထွန်စက်၏လေ့ကျင့်သင်ကြားဗိုလ်ခြေ, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပုံစံမဟာမိတ်ဖွဲ့, မဟာအင်ပါယာ၏စစ်ပွဲများ join မည်! မည်သူမျှ
●မဟာဗျူဟာမြောက်စစ်ပွဲများ Streamer! သင်သည်သင်၏ပိုင်နက်ထဲသို့ပစ်ခတ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုတိုက်ပွဲ PvP ရပေမည်။ ရဲတိုက်ကသင်၏မဟာမိတ်မှာမီးဖမ်းမိလျှင်သင်ဘာလုပျမလဲ သငျသညျသူ့ကိုကျူးကျော်အနိုင်ယူကူညီဖို့တပ်ကိုပို့, သို့မဟုတ်ပြိုင်ဘက်တိုက်စစ်မှုးအပေါ်စစ်ကြေငြာသလား? အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုဥစ္စာပါ!
●မဟာအင်ပါယာ၏စစ်ပွဲများတွင်ပါဝင်! တိုင်းနိုင်ငံနှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့ခြင်းနှင့်အာကာသကျော်လွန်သွားစစ်မြေပြင်ကိုမှန်ကန်အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်ထိန်းချုပ်မှု! သင်အကောင်းဆုံးအင်အားကြီးနှင့်အကျိုးအမြတ်မရ, တစ်ဦးချင်းစီ conquistadors အကြားအရှားပါးဆုံးနှင့် Ngnm ပစ္စည်းကိရိယာများအနိုင်ရသွားနေကြတယ်, လူတိုင်းအားဖြင့်သိနိုင်မည်?
●အစွမ်းထက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူလက်နက်ပါသမိုင်းဆိုင်ရာသူရဲကောင်းများလစောင့်ဆိုင်း! သင့်အဆင့်တိုးမြှင့်နှင့်ဆုတံဆိပ်များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူသူတို့ကိုပေးခွငျးအားဖွငျ့, ပြီးတော့အောင်ပွဲအောင်မြင်ရန်ရန်သင့်တပ်များဦးဆောင်လမ်းပြဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုခဲ့သည်! စစ်တိုက်ခြင်းငှါများ၏သင်တန်းအညီမဟာဗျူဟာနှင့်အံ့အားသင့်လျှော့စျေးကိုပြောင်းလဲရန်, သူရဲကောင်းများ၏ကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်နိုငျ! စွန့်စားမှုသူရဲကောင်းများ၏အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်ပိုပြီးသူရဲကောင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများရရှိရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်!
●မဟာမိတ်အဖွဲ့နေဖို့နဲ့စိန်ခေါ်နှင့်အနိုင်ရဆက်လက်ရန်သင့်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖန်တီးမယ့်ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်သို့မဟုတ်မဟာမိတ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Ahacd မဟာမိတ်များစစ်ပွဲများမဟာမိတ်ဖွဲ့, စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး, မြေယာတိုက်ပွဲ, နန်းတော်၏စစ်ပွဲများ, နိုင်ငံတို့စစ်ပွဲများနှင့်ကျူးကျော်များ၏စစ်ပွဲများကိုတိုက်ခြင်း, လုပ်လုပ်ခြင်းအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ပါ!
●အံ့သြစရာလူမှုရေး features တွေ! ချက်ချင်းဘာသာပြန်ချက်နှင့်အတူဘယ်နေရာကနေမဆိုမည်သူမဆိုအတူ chat! နိုငျငံတျော chat သို့မဟုတ်မဟာမိတ် chat သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ချက်တင်အုပ်စုတစ်စုနှင့်သင့်မိတ်ဆွေများကိုဖန်တီးအသုံးပြုပါ! စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြောဆိုမှုများလန်းဆန်းကာတွန်းပိုစတာတစ်ခုတွေအများကြီး!
မင်းသား, အဆငျ့, ကျွမ်းကျင်မှု, ပစ္စည်းကိရိယာများ, လိုဂိုများအတွက်●ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်မှုစနစ်! သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ရှေ့တော်၌တိုက်ပွဲများအင်အားစုများနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်စစ်ဆေးမှုများအံ့သြဖွယ်များနှင့် Tbaght ပြိုင်ဘက်ရှိသည်!
●ရဲတိုက်၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးနှင့်သင်၏ရဲတိုက်ကိုအလှဆင်နှင့်ထို့ထက် ပို. နောက်ထပ် features တွေရရှိခဲ့တို့နှင့်ကြီးသောရဲတိုက်မြင်ကွင်းကိုကြည့်ခဲ့သည်! သင်၏ဥစ္စာနှင့်သင်၏အစွမ်းသတ္တိကိုပြသ!
● Interfaces ဂိမ်းတခုကိုသင်ပျော်စရာအတွေ့အကြုံကိုပေးနှင့်ပိုပြီးချောချောမွေ့မွေ့ကစားရန်ဗားရှင်း 2.0 အတွက်တိုးတက်ပြီးပါပြီ!
● Aloade အကျဉ်းသား ယူ. ထောင်ထဲမှာစစ်၌ထားတော်မူ၏, မြေယာထံမှနောက်ထပ်အကျိုးခံစားခွင့်ရဖို့, ဒါပေမယ့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောသို့ကျသွားသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်!
●အဆိုပါလိဂ်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုချဲ့ထွင်နှင့်ထို့ထက် ပို. ဆုလာဘ်များနှင့်ပြပွဲ၏အင်အားကြီးရရန်မြေယာသိမ်းပိုက်! အဆိုပါပြိုင်ဘက်များ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေမယ့်လည်း, မြေယာစခန်းများတွင်၏တန်ခိုးစျြလြူမရှုကြဘူး! မဟာဗျူဟာကျွမ်းကျင်စွာ Stbehr ရန်သူများကိုနှင့်မိတ်ဆွေများစီစဉ်!
●တော်ဝင်နန်းတော်လွှမ်းမိုးမှုကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု၏သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ နန်းတော်ပရီးမီးယားလိဂ်နှင့်အတူသိမ်းပိုက်နှင့်အာဏာအရှိဆုံးရှင်ဘုရင်ဖြစ်! သငျသညျတစျလောကလုံးနှင့်သညျနိုငျငံတျော၏အမိန့်အမည်များ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိလိမ့်မည်! နိုငျငံတျောသင့်ရဲ့ကြီးမြတ်ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာအောင်မြင်လိမ့်မည်!
●သင့်ကစားရန်သင့်လျော်တဦးတည်းကိုရှာဖွေနိုင်ငံတို့အကြားလွတ်လပ်စွာရွှေ့ဖို့ရွှေ့ပြောင်းခံရ။ တစ်ခုခုကိုစိန်ခေါ်မှုများအတွက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါကစားသမားနှင့်အတူ teeming အသစ်တစ်ခုကိုနိုငျငံတျောသညျခိုငျမာဖှံ့ဖွိုးတိုးတဇာတ်စင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်သို့စတင်ရန်!
●ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်ကောင်းစွာ run မြို့အခြေခံပါ! အဆောက်အဦးများနှင့်သုတေသန Upgrade တစ်ဒဏ္ဍာရီနိုငျငံတျော၏တည်ထောင်ခြင်းမြှင့်တင်ရန်အရင်းအမြစ်များကို, ရထားတပ်များ, သူရဲကောင်းများကိုစုဆောင်းပါ။
Facebook ကစာမျက်နှာ: https://www.facebook.com/Fatehoon/
الفاتحون: العصر الذهبي အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
الفاتحون: العصر الذهبي အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
الفاتحون: العصر الذهبي အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
الفاتحون: العصر الذهبي အား အခ်က္ျပပါ
mr-robot-games စတိုး 3.74k 5.5M
الفاتحون: العصر الذهبي ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း الفاتحون: العصر الذهبي အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.igg.com/about/privacy_policy.php
လက်မှတ် SHA1: 99:F9:27:4C:15:D6:C5:AE:3F:0F:5C:64:BD:C1:D3:13:0B:B5:D9:3B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): lin
الفاتحون: العصر الذهبي APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ